Ezi ntụziaka nri
Ezi ntụziaka nri dị mma
Ndụmọdụ siri nri
Isi nri n'èzí
Kedu ihe kpatara na azụ m egheghị eghe?
Ihe aghụghọ iji nweta ya nke ọma bụ nkwụsi ike nke batter. … Ọ bụrụ na batter azụ gị adịghị crispy nke ọma mgbe esichara ya, gbalịa jiri ntakịrị mmiri mmiri mee ka batter ahụ belata. Ịkwanye mmanụ ahụ ọkụ ruo na okpomọkụ kwesịrị ekwesị dịkwa oke mkpa ma ọ bụ azụ ahụ ga-etinye oke mmanụ mgbe ọ na-esi nri. …
Azịza ngwa ngwa: Ogologo oge ole ka ị ga-echekwa yabasị eghe?
Edobere ya nke ọma, yabasị esi nri ga-adịru ụbọchị 3 ruo 5 n'ime friji. Ogologo oge ole ka a ga-ahapụ yabasị esi nri na okpomọkụ ụlọ? Nje bacteria na-eto ngwa ngwa na okpomọkụ n'etiti 40 Celsius na 140 Celsius; Ekwesịrị ịtụfu eyịm esiri esi ma ọ bụrụ na ahapụ ya ihe karịrị awa 2 na ụlọ okpomọkụ. Ogologo oge ole ka crispy…
Ị nwere ike ikuku shrimp nru ububa fụrụ akpụ?
Tinye shrimp oyi kpọnwụrụ na traị ikuku ma ọ bụ nkata. Ọ bụrụ na ị na-eme shrimp urukurubụba jide n'aka na ha nọ n'otu oyi akwa. Esi nri na Air Fryer na 390 maka nkeji 10. Na-eje ozi dị ka achọrọ. Enwere m ike itinye shrimp oyi kpọnwụrụ na fryer ikuku? Ọ bụrụ na ị na-eji shrimp raw kpọnwụrụ akpọnwụ, tinye ha niile na…
Ị nwere ike iji Frylight ghee àkwá?
Jiri Frylight fesa ite frying ma tinye n'elu obere okpomọkụ. Chere ruo mgbe Frylight doro anya, gbawaa akwa n'ime pan ma sie nri masịrị gị. Na-ejere ha niile ozi ọnụ ma nwee ọ enjoyụ. Ị nwere ike ighe akwa na mmanụ ịgba? Fesa obere skillet na-adịghị mma na ihe nfe isi nri. Kpoo skillet n'elu ọkara okpomọkụ. Tiwaa akwa n'ime…
Ị jụrụ: Ị nwere ike ikpo ọkụ ọkụ ọkụ?
Igwe ọkụ ahụ bụ nhọrọ ọzọ dị mma maka ịmegharị efere a na-eghe ma ọ bụ ihe ọ bụla a na-esi nri. Tinye mmanụ ma mee ka nri dị ọkụ na obere okpomọkụ ka ịzere isi nri. Ị ga-achọ ịma jijiji ugboro ugboro maka ọbụna kpo oku. Ị nwere ike kpoo ọkụ ọkụ na microwave? Dabere na Ozi Independent na European Food…
Ugboro ole ka ị nwere ike iji mmanụ ihe oriri maka ighe miri emi?
Ndụmọdụ anyị: Site na nri a na-eghe na achịcha, were mmanụ ugboro atọ ma ọ bụ anọ. Site na ihe ndị na-esicha ọcha dị ka ibe nduku, ọ dị mma iji mmanụ opekata mpe ugboro asatọ - ma eleghị anya ọ dị ogologo karịa, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji mmanụ ọhụrụ emeju ya. Enwere m ike iji mmanụ ihe oriri na-eme ihe mgbe ighe miri emi? Ee, ị nwere ike iji ya ọzọ. Mana…
Kedu otu esi echekwa tomato green eghe eghe?
Kedu ka ị ga-esi mee ka tomato akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ eghe esi ísì? Kedu otu esi echekwa tomato akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ e ghere eghe? Ozugbo e ghere ha, ana m akwado iri tomato ozugbo. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-ejupụta na ihe fọdụrụ, ị nwere ike ịchekwa ha na ngwa nju oyi ruo ụbọchị atọ. Iji kpoo ọkụ, tinye skillet mmanụ n'elu ọkara…
Azịza kachasị mma: Ọ dị mkpa ka esi nri anụ ezi a na-agwọbeghị?
Nke bụ eziokwu bụ na a ghaghị ịgwọ anụ ezi niile tupu eri nri. Ọ bụ ezie na anụ ezi a na-adịghị agwọ ọrịa ka na-agwọta anụ ezi, ọ na-enweta usoro dị iche iche. Usoro kacha mma maka gị yana ụtọ karịa! N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anụ ezi a na-adịghị agwọ ọrịa bụ anụ ezi nke a na-ejighị nitrates na nitrites sitere na sịntetically gwọọ ya. A na-esi nri anụ ezi a na-agwọbeghị? Ihe…
Ị nwere ike ịrịa ọrịa site na fries french esighi esighi?
Ọ dị mma iri fries esighi esi esighi? Nduku na-esighi esighi esighi ya esighi ike. Ha bụ poteto ndị starch ha gbajiri agbaji, mana ọ bụghị kpamkpam. Nke a na-eme ka ha dị nchebe karịa poteto raw, mana ọ bụghị nke zuru oke. N'agbanyeghị nke ahụ, ha adịghị mma ka poteto esichara kpamkpam. Ị nwere ike ịrịa ọrịa site na fries oyi kpọnwụrụ esighị ya? Ọ bụrụ…
Kedu ka esi esi esi pizza ọkara esi nri?
Kedu ka m ga-esi esi nri pizza esiri esi nri? Ntuziaka esi nri Pizza ọkara esi nri Kpoo oven ruo ogo 400-425. Tinye pizza na-ekpughị na oven wee sie ihe dịka nkeji 8-12. A ga-eme pizza mgbe chiiz na-atụgharị na agba aja aja. Kedu otu ị ga-esi kpoo pizza esiri esi ọkara? Tinyegharịa Pizza na oven Kpoo ọkụ na…
Page1 Page2 ... Page883 Osote →
Ndewo onye ọ bụla! Abụ m Ninel na echere m na ndị na-ahụ n'anya isi nri, ọ bụghị naanị ighe, obụpde na uzuoku site n'oge ruo n'oge, enweghị ike ịdị ndụ na-enweghị nri dị ụtọ. Ma, olee otú e si akwadebe nri dị ụtọ nke ọma ka ha dị mma? Enwere ọtụtụ ntụziaka n'ịntanetị, mana achọrọ m ịkọrọ gị ole na ole.
© 2022 Ezi ntụziaka nri